Kedu ka esi kwalite ngwaahịa na Amazon site na mmalite?
Onye ọ bụla na-ere ahịa ọ bụla kwesịrị ịma otú e si hazie ngwaahịa na Amazon site na ụbọchị mbụ ha na-ere ihe n'ebe ahụ. Na ịkwado nke ọma na ụlọ ahịa ahụ nke juru ebe niile, onye ọ bụla na-azụ ahịa kwesịrị ime mgbanwe na-agbanwe agbanwe mgbe niile search algorithm (nke a makwaara dị ka A9). Ka o sina dị, enwere usoro iwu dị irè maka oge na ị ga-erite uru, karịsịa ma ọ bụrụ na ị bụ ọhụrụ na njikarịcha Amazon. Ya mere, n'okpuru ebe a, m ga-egosi gị otu ịkwado ngwaahịa dị na Amazon dị ka pro, na-eleghara ma ị natala ahụmahụ na mpaghara a maọbụ na ọ bụghị ma ọlị. Ma, ka anyi tinye uche n'okwu a site na nduzi di mfe ma di mfe site na ndu ndu - long flowy summer dresses.
Olee otú esi emepụta Ngwaahịa na Amazon
Nzọụkwụ Otu: Chọpụta Ihe Ị Pụrụ Isi Nweta Mmasị
Iji mee ka ọtụtụ n'ime ndị na - ịkwesịrị ịkwadebe ụda nke kachasị elu na-emepụta mkpụrụ okwu okwu oke na ngwaahịa dị ogologo maka okwu gị ma ọ bụ ụdị. Ihe bụ na ị ga-achọ ịchọta ndị nwere mpịakọta ọchụchọ kachasị elu, dị ka ihe ndị ahịa gị na-emekarị bụ ịkụ nzọ na ha. Ụzọ kachasị mfe iji ghọta otú ịkwado ngwaahịa na Amazon maka isiokwu ndị ziri ezi na-eleta gị onwe gị taabụ na Onye ahịa Central Keywords. N'ụzọ dị otú a, ị ga-enweta nnukwu foto nke ndepụta ndepụta nke isiokwu ịchọrọ ịchọrọ ị ga-eme ka ọ dị ntakịrị oge.
Nzọụkwụ nke abụọ: Dezie nyochaa ikpeazụ gị na Keywords
Ozugbo ị ghọtara ihe gbasara isi okwu ọchụchọ gị na ihe ịchọrọ ịzụ ahịa, ọ bụ oge iji dozie ndepụta gị. Ekwuru m na ị ga-ewepụ ihe mkpado na-adịghị ekwe nkwa na okwu ogologo oge iji nọgide na-emeri. Nke a bụ ezigbo ngwá ọrụ ị ga - eji kickstart. Enwere onwe ya iji nwalee ya ozugbo, tumadi n'ihi na o nwere mmetụta a na-eji eme ihe na nhazi ndepụta nke ngwaahịa m na Amazon.
Sonar - bụ free isiokwu nnyocha ngwá ọrụ kpọmkwem ahaziri maka ecommerce ere ákwà. Sonar nwere ike inyere gị aka ịghọta otú ị ga-esi kwalite ngwaahịa na Amazon site n'ịkwado njirimara nchịkọta ngwaahịa gị na okwu bara uru ọ bụla ị ga-enwe ike ịkwado maka. Ihe niile ị chọrọ ebe a bụ iji mejupụta isi isiokwu gị isi - ma na-enweta ihe niile dị mkpa maka usoro kachasị mma na omume, dị ka mpịakọta ọchụchọ, isi okwu ederede, ihe ndị na-eme ugbu a nke ezigbo ndị ahịa azụ ahịa ha na Amazon, na aro aro bara uru wetara ozugbo site n'aka ndị na-ere ahịa na-arụ ọrụ n'ebe ahụ.
Nzọụkwụ nke atọ: Nye Spur na Ọnụ Nhọrọ Gị
Na-atụle na a na-atụgharị ntọala ntọala maka isi akwụkwọ Amazon na ihe dị ka pasent 13, ị ga - ga-enweta nnukwu CTR ọnụego maka ntinye aka nke ngwaahịa gị ka search engine rankings gị malite na-eto eto. Ndị a bụ ụfọdụ ndụmọdụ bụ isi maka ịmalite ịmegharị ndị ahịa ndị ọzọ ka ha banye ezigbo ndị na-azụ ahịa:
Mepụta nkọwa nkọwa siri ike nke bara uru nke isiokwu gị ga-emeri ka ọ ghara ịjụ ajụjụ maka onye ahịa agụ ya.
Tinye naanị ihe dị ọcha na nke doro anya nke dị elu, nakwa dị ka eserese ihe osise, vidiyo na ihe ọ bụla ọzọ na-ekpuchi anya nke ihe ngosi nke ga-enyere aka na nkọwa kachasị mma. Ntughari: Kwesịrị, ị ga-ekwe ka nhọrọ mbugharị maka setịpụrụ ihe oyiyi ngwaahịa gị - ọ na-akwụ ụgwọ mgbe nile, n'ezie.
Kọwaa n'ụzọ doro anya ihe mere ngwaahịa gị pụrụ iche. Ọ bụrụ na o kwere omume, mee ike gị niile ịgụnye ọtụtụ nyochaa ngwaahịa ndị ọzọ dịka i nwere ike. N'ikpeazụ, egbula oge ị ga-agba usoro nyocha A / B siri ike iji chọpụta ụdị ọrụ dị iche iche ma ghọta ihe na-arụ ọrụ nke ọma maka gị, na ihe ga-abụ na ọ dịghachi ma ọ bụ ma ọ dịkarịa ala jigide akwụkwọ maka ọdịnihu.